Realtime chat on mmweather-chatroll | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
Realtime chat on mmweather-chatroll
November 9, 2009 — mmweather
mmweather member များအချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ mmweather administration team နဲ့ပဲ ဖြစ်စေ real time discussion လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခု chatroll ကို ညွှန်ပြပေးတဲ့ “နေရာ” ဘလော့ကိုကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
mmweather – Fullscreen
Posted in Announcements, Education. Tags: announcement.2Comments »
2 Responses to “Realtime chat on mmweather-chatroll”
အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် mmweather တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဇာနည်ခင်ဗျား။
« အိန္ဒိယနှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အခြေအနေများစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီ
ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်း ၆.၂ အင်အားရှိမြေငလျှင်လှုပ် »